इलेप खोला आयोजनाको पिपिएमा हस्ताक्षर - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
इलेप खोला आयोजनाको पिपिएमा हस्ताक्षर
असार २६, २०७५ 2014 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
धादिङमा निर्माण हुने २३.६ मेगावाटको इलेप (तातोपानी) खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवर्धक जलशक्ति हाइड्रो कम्पनीबीच पिपिए भएको हो ।
पिपिएमा प्राधिकरणको योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंह र कम्पनीका अध्यक्ष तिलक लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत सुख्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) मा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाम (१६ जेठ-१५ मंसिर) मा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी पिपिएमा हस्ताक्षर भएको हो ।
विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि आयोजनाले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने छ । अबको एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापनको जोहो गरेर निर्माणमा जाने आयोजना पूरा हुँदा वार्षिक १४ करोड ४८ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
आयोजना सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ४७ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । निर्माण सुरु गरेको ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । प्राधिकरणसँग भएके पिपिए अनुसार आयोजनाले २०८१ साल मंसिरबाट व्यापारीक उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत ३२ किलोमिटर टाढाको त्रिशूली थ्रि ‘बी’ हबमा लगेर जोडिनेछ । आवश्यक ३२ किलोमिटर प्रसारण लाइन कम्पनी आफैंले निर्माण गर्नेछ ।